Shock absorber, auto coilover, piston tsvimbo, stamping chikamu, poda metallurgy, chitubu, chubhu, mafuta chisimbiso, discs, vhiri Hub uye zvimwe auto zvikamu, mitambo zvikamu.
Zvigadzirwa zvaMax zvakatengeswa kuRussia, Europe, Japan, Korea, Africa, Canada, USA, Australia uye zvichingodaro. Max ane mukurumbira wakanaka uye akasimbisa hukama hwenguva refu nevatengi.
Haisi chakavanzika kuti iyi mhando yezvishandiso haisi nyore kuwana kana, kunyatsojeka, kuti zvakaoma kuwana emhando yepamusoro auto zvikamu. Kunyanya nyika yepamhepo izere nemawebhusaiti anoti anopa zvakakosha uye zvisingadhuri mhinduro, asi haakwanise kuzvipa. Taida kushandura paradigm iyi.
Mufaro Wako, Basa Redu
Kugutsikana kwemutengi ndicho chinangwa chedu chete uye tinogara tichishanda nesimba kuti tive nechokwadi chekuti vatengi vedu vane ruzivo rwakakwana. Isu tinotarisira nezvese nyaya inogona kumuka isati yasvika, panguva uye mushure mekurongeka kwaiswa, tichikubvumidza iwe kuti uise kurongeka murusununguko rwakakwana uye nechokwadi chekuve nechikwata chakazvipira chinokutsigira.
Chikwata chemainjiniya chaMax chine ruzivo rwakapfuma mumutsara wezvikamu zvemotokari, kunyanya munzvimbo yekuvhundutsa, isu hatingope zvigadzirwa zvevatengi chete, asi zvakare tinopa rutsigiro rwehunyanzvi, kugadzira-nguva yese yekutarisa uye yemhando yepamusoro sevhisi. OEM uye ODM zvese zviripo. Max aigona kupa ese marudzi ese ekuongorora sevhisi uye mushumo unosanganisira PPAP chirevo, RT, UT, MPI, WPS & PQR uye zvichingodaro.
Iyo kambani Max Auto Parts Limited
Tikugashirei kuMax Auto Zvikamu mugadziri uye mutengesi wezvikamu zvemotokari